Nata ihe ntụrụndụ na ezigbo self-improvement website t egwuregwu cha chan'ịntanetị - jluis37.com
Ugbu that a ị nwere ike earnextrapastime yana ezigbo ego website Id igwu egwu egwuregwu cha cha. Ọtụtụ nyiwe na-enye ndị kasị mma na maa mma egwuregwu dị ka oghere online. Enwere ọtụtụ egwuregwu enwere ike ịnweta na ngwa maka ndị egwuregwu ahụ. Egwuregwu ịgba chaa chaan’ịntanetị na-emekwa ka ndị egwuregwu nweta self-improvement website Id spottingstakes d e egwuregwu ọ bụla. Egwuregwu egwuregwu ndị that a na-enweta na saịtị ahụ bụ ihe ọzọ na-emezu ma na-enyekwa ọjoyụ. Egwuru egwu egwuregwu cha cha ọ bụla zuru ebe niile mana ịnweta ezigbo self-improvement website na egwuregwu cha cha bụ engagingspotlight nke na-agbasawanye na egwuregwu cha cha.
Ọtụtụ egwuregwu enwere ike ịnweta d e ngwa ahụ iji kpọọ ma nweta ezigbo self:
Ha na-enye ụdị dịgasị iche iche nke egwuregwu cha chan’ịntanetị maka ịkpọ ndị egwuregwu cha cha. Ndị a encompassnumerouscategoriesoftablegames, cardgames, dais egwuregwu, oghere egwuregwu t. Egwuregwu cha cha n’ịntanetị na-emetụta egwuregwu cha cha nke bụ egwuregwu okpokoro anụ ahụ. Onye na-egwu egwuregwu egwuregwu cha cha na-echebara akụkụ niile anya iji nye nnabata dị ukwuu n’oge ngosi nke ngwa a. The cashput intotheapplication kwesịrị ekwesị iji kpọọ ụdị egwuregwu ọ bụlan’ịntanetị d e ngwa ahụ. Ha na-enye nkwenye nke ndị ahịa na-egwuri egwu na ngwa ahụ ma chekwaa information niile na-enyocha nkọwa nzuzo nke ndị ahịa ọ bụla. Ya only, ndị na-egwu cha chan’ịntanetị nwere ike igwu ụdị egwuregwu cha cha ọ bụla mgbe ha nyefere nkọwa nke onwe ha dum na nkwenye. The ngwa nwere that a nnukwu ọnụ ọgụgụ nke iche iche oghere egwuregwu inweta na-egwu na online cha cha egwuregwu egwuregwu nwere ike spotstakes na ụdị ọ bụla nke egwuregwu na egwuregwu na-amasị na-egwu. Ngwa na egwuregwu cha cha n’ịntanetị enweghị ebe ọhụụ na onye ọkpụkpọ nwere ike ịgbanye nke ọ bụla pere mpe dabere na uche ya. Usoro nkwụnye self maka self love a t – etinye yana self ya yana mwepu nke usoro self enwetara bụ nke dị nwayọ d e ọ ga – ewetara ndị egwuregwu cha cha nsogbu. A ga-etinye ego ego ndị ọkpụkpọ ahụ nwetara website t onye ọkpụkpọ ahụ ngwa ngwa na onye ọkpụkpọ ahụ. Maka igwu egwu egwuregwu cha chan’ịntanetị na ngwa ahụ, ihe niile ịchọrọ ka ọ debanye ma mepụta akaụntụ d e ngwa ma ọ bụ saịtị. Usoro ndenye aha dị mfe ma nwee ike ịrụ ọrụ d e obere oge. Ihe information ajuju kwesiri ka abanye un nke oma, ma oburu d e obughi na ikwenye ahia. Egwuru egwu egwuregwu cha cha n’ịntanetị maka ezigbo ego bụ ihe siri ike na onye ọkpụkpọ ga-echere egwuregwu nke egwuregwu cha cha. Ekwesiri itinye nlebara anya mgbe ị na-egwu egwuregwu cha cha dị ka nke a gụnyere ihe ize ndụ akụ na ụba. The participant nwere ike igwu online cha cha egwuregwu si ngwa ma ọ bụ website Id saịtị. Onye ọkpụkpọ nwere ike ịmụ ya na ịntanetị ma nwee ike igwu egwuregwu cha cha website Id ịmalite akaụntụ na ngwa ahụ. Saịtị ahụ na-enyekwa ngalaba dị iche iche nke ezigbo mma.